ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » တာဝန်ရှိသော » ခြေညှပ်ဖိနပ်ဖောင်ဒေးရှင်း ကြီးမြတ်သောပုံစံ။ Inc. အပြုံးများဖန်တီးခြင်း။
နိုင်ငံတကာသတင်းများ • ကာရစ်ဘီယံ • ဟိုတယ်နှင့်အပန်းဖြေစခန်းများ • သတင်း • တာဝန်ရှိသော • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ • တာ့ခ်နှင့် Caicos ကြားဖြတ်သတင်းများ
ရာနှင့်ချီသော ပထမဆုံးစန္ဒကူးဖောင်ဒေးရှင်း၊ ကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်းများ၊ ကြီးမြတ်သောပုံစံဖြင့် ကုသခဲ့သည်။ Inc. ၏ 1000 Smiles သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးခန်း
Sandals Foundation 1000 Smiles သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးခန်း
Belongers ရာနှင့်ချီသည် Turks and Caicos ရှိ Five Keys Road ၏လမ်းမများပေါ်တွင် စိတ်လှုပ်ရှားစွာ တန်းစီနေပြီး ကျွန်း၏ပထမဆုံးအကြိမ် 1000 Smiles သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးခန်းရှိ အံ့သြဖွယ်သွားဆရာဝန်များနှင့် အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများဖြင့် တွေ့ဆုံကာ ကုသမှုခံယူရန် စိတ်အားထက်သန်စွာတန်းစီနေပါသည်။
ပထမတန်းစား သွားနှင့်ခံတွင်း စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ပညာရေးကို အခမဲ့ သုံးစွဲခွင့် ပေးသည့် အဆိုပါ ပရိုဂရမ်ကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အခြေစိုက် အကျိုးအမြတ်မယူသော Great Shape မှ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ Inc. နှင့် Beaches Resorts များကိုလည်ပတ်သည့် Sandals Resorts International (SRI) ၏ ပရဟိတလက်ရုံးမှ ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ အဆိုပါခြေနင်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ.
တနင်္လာနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 15 ရက်နေ့မှ စတင်ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့မှစ၍ လူပေါင်း 700 ခန့်သည် ဖြည့်သွင်းခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်း၊ အမြစ်တူးမြောင်းများ၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ သွားအံများ နှင့် 60 Great Shape အဖွဲ့မှ အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိခဲ့ပါသည်။ Inc. မပါပါဘူး။
Great Shape ၏တည်ထောင်သူအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Joseph Wright။ Inc. က "ဂျမေကာနိုင်ငံ၊ Negril တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးပရောဂျက်ပြီးနောက် 1000 နှစ်အကြာတွင် Turks and Caicos ကျွန်းများတွင် 18 Smiles ပရောဂျက်ကို စတင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ Covid-19 ကပ်ရောဂါသည် ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်သောနိုင်ငံများရှိ အစိုးရများ၏ ပုံမှန်သွားဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်စွမ်းကို ဆိုးရွားစွာပိတ်ပစ်လိုက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၂ နှစ်နီးပါးကြာပြီးနောက်တွင် သွားဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်မှုမှာ ပြင်းထန်လာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။”
Turks and Caicos မှာ” Wright က ဆက်ပြောတယ် “ဇာတ်လမ်းက အတူတူပါပဲ။ လိုင်းတွေက ရှည်လျားပြီး လူတွေက အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်။ Sandals ဖောင်ဒေးရှင်း၏အကူအညီဖြင့် Turks and Caicos တွင် 1000 Smiles Project စတင်ခြင်းသည် ထူးခြားသောအချိန်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ရသောစိန်ခေါ်မှုများစွာရှိသော်လည်း သိသိသာသာချောမွေ့အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
ဆေးခန်းများကို နေ့စဉ် ည ၈း၃၀ မှ ၄း၃၀ အတွင်း Covid-8 ဘေးကင်းရေး ပရိုတိုကောလ်များနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း ဂရုတစိုက် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ယနေ့အထိ အဖွဲ့များသည် ပညာရေးဝန်ကြီးနှင့် Five Cays ခရိုင်အတွက် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော ကိုယ်စားလှယ် အပါအဝင် ဒေသခံလူထု၏ ထင်ရှားသော ခရီးစဉ်များကို ပျော်ရွှင်စွာ လည်ပတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ရေချယ်တေလာ။ Hon Taylor သည် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံကာ Great Shape နှင့် ပူးပေါင်း၍ အနာဂတ်အစီအစဉ်များ၏ အလားအလာများကို ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့သည်။ Inc. နှင့် Sandals ဖောင်ဒေးရှင်း။
Sandals ဖောင်ဒေးရှင်းမှ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Heidi Clarke သည် မိသားစုများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုများကို လက်လှမ်းမီမှု တိုးမြှင့်ခြင်းသည် ဒေသတွင်းရှိ ပြည်သူများ၏ ဘဝတိုးတက်စေရေးအတွက် ပရဟိတအဖွဲ့၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သတိပြုမိကာ မိသားစုများ လာရောက်ကြည့်ရှုသူအား ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။
"လှပသော Turks and Caicos ကျွန်းစုများသို့ 1000 Smiles သွားဘက်ဆိုင်ရာ ပရိုဂရမ်ကို ချဲ့ထွင်ထားသည်ကို မြင်တွေ့ရသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ အလွန်ဝမ်းသာပါသည်။ ကျန်းမာသောလူများသည် ကျန်းမာသောအသိုက်အဝန်းများကို ဖန်တီးကာ ကာရေဘီယံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့် ဒေသတွင်းကျန်းမာရေးကဏ္ဍနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ကျွန်ုပ်တို့ တတ်နိုင်သမျှ လုပ်ဆောင်ရန် အပြည့်အဝကတိပြုပါသည်။"
“လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ့်ရှစ်လက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက မိသားစုတွေအတွက် ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်၊” ဟု Clarke က ဆက်လက်၍ “မိသားစုများ ၎င်းတို့၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်အချို့ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်းအတွက် ဤကူးစက်ရောဂါကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အရေအတွက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အလွန်သတိရှိမိပါသည်။ ကောင်းမွန်သောခံတွင်းကျန်းမာရေးသည် အခြားပြင်းထန်သောရောဂါများဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးသည့်အတွက်ကြောင့် ဤဆေးခန်းများမှ လူများစွာကို ၎င်းတို့ပြုလုပ်နိုင်သည့် အရေးကြီးဆုံးကျန်းမာရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို တတ်နိုင်သမျှ ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးစေလိုပါသည်” ဟု အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Heidi Clarke၊ ဖိနပ် ဖောင်ဒေးရှင်း။
ခြေနင်းဖောင်ဒေးရှင်းသည် ကြီးမြတ်သောပုံစံ။ Inc. သွားဘက်ဆိုင်ရာပရိုဂရမ်သည် ဂျမေကာ၊ စိန့်လူစီယာနှင့် ဂရီနာဒါကျွန်းများတွင် လည်ပတ်နေသည့် ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကတည်းက ကာရေဘီယံတစ်ခွင် အဓိက အဓိကလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင် Turks နှင့် Caicos ကျွန်းစုများရှိ မစ်ရှင်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအားလုံးကို ဟိုတယ်၏ ပရဟိတလက်ရုံးမှ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ အခြေခံအဆောက်အဦနှင့် ဝန်ထမ်းများပံ့ပိုးမှုဖြင့် Beaches Resorts တွင် လက်ခံကျင်းပလျက်ရှိသည်။
Swoop မှ Palm Springs သို့ ပျံသန်းမည့် ခရီးစဉ်အသစ်များကို စတင်လိုက်ပြီ...
စဉ်ဆက်မပြတ် IMEX ၏ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မြင်ကွင်းများ၏ နောက်ကွယ်မှ မြင်ကွင်းတစ်ခု...
The St.Regis San Francisco သည် General Manager အသစ်အမည်များ